के तपाईसंग बैङ्कको सेयर छ ? दिदैछ ४ अर्ब ५७ लाखको बोनस – Arthatantra.com
के तपाईसंग बैङ्कको सेयर छ ? दिदैछ ४ अर्ब ५७ लाखको बोनस
काठमाडौ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सेयरधनी लाई ४ अर्ब ५७ लाख रुपैया बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने भएको छ । बुधबार सम्पन्न कम्पनीको ३१ औँ बार्षिक साधारणसभाले सेयरधनीलाई शतप्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकले एफपीओबाट संकलित प्रिमियम र गत आवको नाफाबाट सेयरधनीलाई एक बराबरक एक कित्ता बोनस सेयर वितरण गरेको हो ।
४ अर्ब ५७ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको चाटर्डको शतप्रतिशत बोनसपछि बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब एक करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले एक अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । सो अवधिमा कम्पनीको व्यवसाय २५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ३९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।
बैंकको आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकालीमा बुधबार सम्पन्न साधारण साधारणसभामा सम्बोधन गर्दै बैंकका अध्यक्ष जितेन्दर अरोराले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
सभाले बोनसमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ५.२६ प्रतिशत नगद लभांश समेत अनुमोदन गरेको छ भने अधिकृत पुँजी ९ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने विशेष प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकले ४८ करोड २५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर प्रतिसेयर आम्दानी ४८ रुपैयाँ कायम गरेको छ । एफपीओ विक्रीपछि बैंकमा स्ट्याण्डार्ड चार्टर्ड ग्रुपको ७०.२१ प्रतिशत र साधारणको २९.७९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम भएको छ ।
सबै वाणिज्य बैंकहरुले हकप्रद विक्री गरेर अपुग रकम बोनस वितरण गरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्त्ता पूँजी ८ अर्ब पुर्याएपनि चार्टर्ड बैंकले भने बोनसबाटै पूँजी कायम गर्ने पहिलो बाणिज्य बैंक बनेको छ ।
चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुर्याउँदै माछापुच्छ्रे बैंकले गर्यो बोनसमा शेयर दिने निर्णय पोखरा । माछापुच्छ्रे बैंकको ग्राण्ड होटल पोखरामा शुक्रबार सम्पन्न १९ औँ वार्षिक साधारण […]